Tapatapakahitra niarahan'ny Pôetawebs tamin’i JOSÉCLAUDIO
Poeta mbola ao anatin’ny fahatanorana tanteraka indray no vahinintsika amin’izao fiandohan’ny taona vaovao 2016 izao. TOKINIAINA Lalatiana José no tena anarany, fantatry ny maro amin’ny solon’anarana hoe Joseclaudio. Avy any Ambositra izy ary mbola tsy ao anaty fikambanana. Arilala Andriamamonjy no mitafatafa aminy, eo amorom-patan’ny Pôetawebs.
Faly miarahaba an'i TOKINIAINA Lalatiana José izahay eto amin’ny Pôetawebs tonga mitapatapaka ahitra eto aminay amin’izao taona vaovao izao.
Dia faly miarahaba antsika rehetra sy ireo mpikambana eto amin’ny Pôetawebs.
Joseclaudio no ahafantarana anao eo amin’ny sehatry ny haisoratra. Azonao ambara amin’ny mpisera ve io safidin'ny anarana diam-penina io?
Ilay hoe José aloha anarako e, fa natambatro amin’ilay hoe Claudio satria anarana tiako ilay izy.
... fa nisy fotoana koa efa nitondranao ny solon’anarana hoe Imanga raha tsy diso aho!
Eny, Imanga, loko izy io fa ohatra ny tsy dia nahasarika ahy loatra ka naleoko nitazona ilay Joseclaudio ihany.
Joseclaudio io tokoa no sonia hita amin'ireo tononkalonao mivelatra eto amin’ny aterineto. Anisan'izany ny tranonkala Vetso Serasera sy ny vondrona Aingampanahy ao amin’ny “facebook”. Inona no nahasarika anao tamin’ireo tranonkala ireo?
Ny tranonkala Vetso Serasera dia itahirizako ireo tononkaloko sady ho fampahafantarana ny olona ireo asa soratro. Ny ao amin’ny “Aingampanahy” indray dia fizarana amin’ireo namana ny vokatra asa soratra.
Mahafinaritra tokoa izay fitiavana mizara izay, toy izao ataonao ho an'ny mpiseran'ny Pôetawebs izao. Ahoana indray ny fahitanao an'ity tranonkala ity?
Mahaliana aloha izy e, satria ahafahana mampivelatra ny tontolon’ny pôezia.
Ianao tokoa avy any Ambositra, misy amin’ireo tononkalonao ve ahatarafana ny maha Betsileo anao?
Eny, avy any aho fa hatreto aloha tsy misy ka! Saika amin’ny teny malagasy ofisialy avokoa.
Ny famoahana boky indray...
Hatreto aloha tsy mbola namoaka e! Fa efa mikasa, izany hoe ny enti-manana no mbola tsy ampy.
Ary mba inona ho’aho no nahatonga anao nanoratra e?
Fitiavana ny kanto malagasy sy fanohizana ny soratra tsy vitan’ireo mpanoratra fahiny.
Izany hoe nisy mpanoratra fahiny nitaiza sy nanolokolo ny ainga efa tao anatinao?
"misy ainga te hitroatra foana ato amiko"
RABEARIVELO sy RATANY no mpanoratra tena ankafiziko ary misy ainga te hitroatra foana ato amiko isaky ny mamaky ny asasoratr’izy ireo aho.
Ahoana indray no fahitanao ny firoborobon’ny pôezia ankehitriny?
Maro dia maro tokoa ireo mpanoratra amin’izao fotoana izao fa ny lesoka be dia be dia eo amin’ny tsipelin-teny, lasa fitantarana alahelo sy adim-piainana fotsiny fa tsy manaja ilay kanto intsony.
Marina izany. Inoako fa manana hafatra ampitaina ho azy ireo ianao.
Tsara ny kanto malagasy koa kajio sy hajao fa io no antsika.
Ianao tokoa mbola tsy anaty fikambanana hoy isika teny am-piandohana.
Manam-paniriana aho, fikambanana toa ny Havatsa na Sandratra no mahaliana ahy.
Dia mirary anao mba ho tanteraka izay fanirianao izay. Amaranantsika ny resaka ary, mba mangataka andinin-tononkalo iray na roa tsy afaka am-bavanao atolotra ho an’ny mpiserantsika.
Tononkalo nosoratako izy ity.
“...fony vao niandoha
ny azy ny hasambarany,
dia matory tsy mifoha,
hadinonao ny anarany”
“misy olona any ho any
Tsy manadino anao izany”
Eny ary fa dia misaotra anao ny Pôetawebs tamin’ny fahafoizanao fotoana ho an’ny mpiserantsika.
Ianareo no isaorana be indrindra!
Mandram-pihaona àry ô!